Home News Dhaq Dhaqaqi Gobolka Banaadir oo Yaraaday&ENG yariisow oo Boobkii Ugu Xoogana Ka...
Dhaq Dhaqaqi Gobolka Banaadir oo Yaraaday&ENG yariisow oo Boobkii Ugu Xoogana Ka Wada Xarunta Dowlada Hoose
Iyado Musuq Maasuq xoogan uu ka jiro Xarunta Dowlada Hoose ee Xamar aya hada waxa si xoogeystay boobkaasi baahsan uu duqa Muqdisho ka wado Gobolka.
C/raxmaan Cumar Cusmaan Yariisow aya waxa uu haatan si toos ah ula waregay dhaqalaha ka so xaroodo Gobolka banaadir.
Duqa Muqdisho oo tan iyo marki xilkasi uu qabtay ka wada gudaha Muqdisho xaflado xiriir ah oo ku baxaya dhaqaalo badan oo hantida shacabka ah.
ENG yariisow aya shaqsiyad saxibo dhaw yihin u magacabay xafiisyada ay ka baxan dhaqalaha gobolka waxana yaraaday lacagaha ka baxa iyado dhaman dhaqalahasi ay gacanta ugu jiran shabakad uu isaga madax u yahay.
Sido kale cabashada ka tagan Xarunta dowlada hoose oo Sameyn xoogan ku heysay Bulshada Soomaaliyeed,waxa cabasho xoogan hada ay soo foodsartay wariyayaasha ka howlgala Muqdisho oo xiliyada loga yeero Xarunta dowlada hoose laga joojiyay lacagaha la siin jiray taasi oo wax la xishooda ah.
Arintaan ayay ku micneeyeen mid Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir uu ku doonayo inuu ku afduubto dhaqaalaha ka soo xarooda ilaha dhaqaalaha Gobolka Banaadir sida canshuurta iyo deeqaha caalamiga ah.
Qaar ka mid ah shaqaalaha Gobolka Banaadir iyo Wariyeyaasha warka ka doonaya xarunta Gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyay iney yaraatay dhaq dhaqaaqii xarunta iyo lacagihii xagga warbaahinta lagu bixinayay,islamarkaana Guddoomiyaha uu xirtay Akoonada lacagta ka baxeysay.